Walaac Cusub oo Kasoo Cusboonaaday Dowladaha Carabta | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waxay rumaysan yihiin in qalabkan ugu dambeeyay uu ka yimid dagaallamayaal Shiica ah oo jooga dalka Ciraaq, oo ay maalgeliyeen isla markaana tababareen ciidanka ilaalada kacaanka Iran. Baxreyn waxay muddo dheer ku eedeynaysay Iran, gaar ahaanna shakhsiyaad ka tirsan hay’addeeda sirdoonka, inay wadaan rabshado dagaal wata oo ka dhaca dalkaasi jasiiradda ah.
Dadka wax lafagura waxay la tahay in ujeeddada qaraxyadaasi ay tahay in la kiciyo jawaab dagaal oo ka timaad Shiicada, si loo qarxiyo dagaal diineed oo Sunniyiin badan oo Khaliijka ka tirsan ay ciidan u noqdaan kooxda Daacish. Kaddib markii la garaacay Sacuudiga iyo Kuwait, khubaradu waxay rumaysan yihiin in Baxreyn ay u muuqato bartilmaameedka xiga. Tirada taageerayaasha Daacish ee gobolka Khaliijka aad ayay u badan tahay, waxaana dhici karta inay aad uga badan tahay in tirooyinka rasmiga ah ay muujinayaan.
Bishii July mas’uuliyiinta Sacuudigu waxay ku dhawaaqeen inay xireen 431 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Daacish, waxaana intaas dheer 93 qof oo la xiray bishii April.
Ayman Deen, oo ahaan jiray hawl wadeen A-qaacida iyo khabiir arrimaha Daacish, waxaa uu rumaysan yahay in kooxda mintidiinta ahi ay dhowaan wax ka beddeshay qorshaheeda dagaalka. Waxaa uu sheegayaa in halkii ay taageerayaashooda Sunniyiinta Khaliijka ku dhiirri gelin lahaayeen inay yimaaddan Suuriya, uu hoggaanka Daacish haatan u sheegayo inay waddammadooda iska joogaan si ay halkaas weerarro uga qorsheeyaan lagu qaado mas’uuliyiinta, dadka Shiicada ah iyo reer galbeedka.